Ruushka Oo Sameeyey Markab Cusub Oo Barafka Kala Jeexa – HCTV
Ahmed Cige 0	May 26, 2019 1:15 pm
Siberia, (HCTV) – Dalka Ruushka ayaa soo bandhigaymarkab cusub oo awood u leh inuu barafka dhexmaro, waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka hufan ee dib u cusbooneysiinta iyo ballaadhinta gaadiidka maraakiibta si loo hagaajiyo awoodda ay u leedahay inay ku xakamayso awoodda ganacsiga Arctic.
Markabka, oo lagu magacaabo Ural, oo la soo dhigay dekedda St Petersburg, ayaa noqon doona ka ugu weyn uguna balaadhan aduunka ee Baraka kala jeexa.
Ruushku wuxuu dhisayaa kaabayaal cusub oo dib u habaynaya dekaddahiisa, iyadoo ay jiraan xaalado cimilada oo kulul.
Markabkan Ural ayaa waxa lagu wareejin doonaa shirkad Ruush ah oo la yidhaahdo Rosatom sannadka 2022 ka dib labada kale ee ayaa sii socon doona, oo hawlahaasi laga sii wadi doonaa Arktika (Arctic) iyo Sibir (Siberia).
“Ural oo ay weheliyaan laba kale oo mataano la ah waxay udub dhexaad u yihiin mashruuceena istaraatiijiyadeed ee furitaanka NSR-ka ee howlaha sanadka oo idil,” ayuu yidhi Alexey Likhachev, madaxa fulinta ee Rosatom.
Madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ilaa bisha April uu Ruushku sii wadi doono dhismaha warshadaheeda iyada oo ujeedadu tahay in si weyn loo xoojiyo gaadiidka xamuulka ee ku yaala Arctic.
Gawaadhida ayaa qayb ka ah inay dhaqaajiyaan oo ay xoojiso gacan ku haynta Moscow ee waqooyiga, iyada oo ay ugu wacan tahay hannaanka dhaqanka Kanada, Maraykanka iyo Norway, iyo sidoo kale Shiinaha cusub.
2035, Putin ayaa sheegay in Ruushku Arctic uu kaga shaqeyn doono ugu yaraan 13 farsamo oo cusub, oo sagaal ka mid ah ay u adeegsan doonaan awoodda Nukliyeerka.